ဘုရင်ရှောလမုန်၏အပိုင်း ၂၂ - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2017-03 > ရှောလမုန်မင်းကြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 22 ၏မိုင်းများ
ဂျေဆန်က“ သူတို့ကကျွန်မကိုမစီရင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မချာ့ချ်ကနေထွက်သွားတယ်။ "ဒီအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ငါကျမ်းစာသင်အံမှုတွေလုပ်တယ်၊ ဖျားနာသူတွေကိုလာလည်တယ်၊ ပြီးတော့ဘာကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာတွက်ချက်တာလဲ၊ သူ၏တရားဒေသနာသည်အိပ်ပျော်ရန်၊ သူ၏ကျမ်းစာအသိပညာမှာညံ့ဖျင်းပြီးသူသည်လည်းဖော်ရွေမှုမရှိပါ။ ဂျေဆန်၏မကျေနပ်မှုကကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပို၍ လေးနက်သောအရာ - သူ၏မာနကိုပြသခဲ့သည်။
မာနမျိုးသည် ဘုရားသခင်မုန်းတီးခြင်း (သု 6,16(၁၇) မိမိကိုယ်ကို လွန်ကဲစွာ တွက်ဆပြီး သူတစ်ပါးကို တန်ဖိုးထားတတ်ခြင်း။ စကားပုံများတွင် 3,34 ဘုရားသခင်သည် “မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ကို မထီမဲ့မြင်ပြု” ကြောင်း ရှောလမုန်မင်းကြီး ထောက်ပြသည်။ ဘုရားသခငျ၏အကူအညီကိုအားကိုးရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပျက်ကွက်စေသောသူတို့အားအသက်တာ၏လမ်းစဉ်ကိုဘုရားသခငျသညျဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး မာန်မာနဖြင့် ရုန်းကန်နေကြရသည်၊ ထိုအရာသည် မကြာခဏဆိုသလို သိမ်မွေ့သောအကျင့်ကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့ သတိမပြုမိပေ။ “သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရှိသည်။ မာန သို့မဟုတ် နှိမ့်ချမှုက ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးနှင့် အပြုအမူကို လမ်းညွှန်နိုင်စေနိုင်သည်။ နှိမ့်ချမှုဟူသည် အဘယ်နည်း၊ နှိမ့်ချမှု၏သော့ချက်ကား အဘယ်နည်း။ ဘယ်ကနေစမှာလဲ? ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးလိုသည့်အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင်ထံမှ နှိမ့်ချမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ရွေးချယ်နိုင်မည်နည်း။
စွန့် ဦး တီထွင်သူအများအပြားနှင့်စာရေးဆရာစတီဗင်ကေ။ သူ့မှာပိုက်ဆံတွေ ၀ ယ်နိုင်သမျှရှိပေမဲ့သူမပျော်ဘူး၊ ခါးသီးပြီးမြန်မြန်ဆန်တယ်။ သူ၏ ၀ န်ထမ်းများ၊ သူ့မိသားစုပင်လျှင်သူ့ကိုမုန်းတီးသည်။ သူ၏ဇနီးသည်သူ၏ရန်လိုသောအပြုအမူကိုမခံရပ်နိုင်တော့ဘဲသူမအားသင်းအုပ်ဆရာအားသူနှင့်စကားပြောရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဓမ္မဆရာသည်ထိုသူ၏ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောသူ၏မိန့်ခွန်းများကိုနားထောင်ပြီးထိုသူ၏နှလုံးနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးကြောင်းမာနကြီးသည်။ သူကသူ့ကုမ္ပဏီကိုဘာမှမလုပ်ဘဲတည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ဆိုတယ်။ သူကသူ့တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရဖို့ကြိုးစားအလုပ်လုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ သူဟာအရာရာတိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးပြီ၊ ဘယ်သူ့ကိုမှအကြွေးမဆပ်ဘူးလို့ဝါကြွားခဲ့တယ်။ ထို့နောက်သင်းအုပ်ဆရာက“ မင်းရဲ့နှီးတွေကိုဘယ်သူပြောင်းတာလဲ။ အဘယ်သူသည်သင့်ကိုနို့စို့သူငယ်ဖြစ်သနည်း။ ဘယ်သူ့ကိုစာဖတ်တတ်ဖို့သင်ပေးခဲ့တာလဲ။ သင့်ရဲ့လေ့လာမှုကိုအပြီးသတ်နိုင်ဖို့မင်းကိုအလုပ်တွေပေးခဲ့တာဘယ်သူလဲ။ စားသောက်ခန်းမထဲမှာမင်းအစားအစာဘယ်သူ့ကိုပေးသလဲ သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်ရှိသောအိမ်သာများကိုမည်သူရှင်းပေးသနည်း။ » ဝင်လာသောထိုသူသည် ဦး ညွှတ်၏။ ခဏလေးအကြာတွင်မျက်လုံးများဖြင့်သူဝန်ခံခဲ့သည် -“ အခုငါစဉ်းစားလိုက်တော့ငါဒါတွေအားလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ တခြားသူတွေရဲ့ကြင်နာမှုနဲ့ထောက်ခံမှုမရှိရင်ငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ သင်းအုပ်ဆရာကသူ့ကို“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မထင်ဘူးလား” ဟုမေးခဲ့သည်။
ထိုလူ၏နှလုံးသည်တစ်နေ့မှနောက်တစ်နေ့သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ နောက်လများ၌သူသည်သူ၏ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်သူ့ထင်မြင်ချက်အရသူ့ဘဝကိုအထောက်အကူပြုသူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းစာရေးခဲ့သည်။ သူဟာနက်ရှိုင်းစွာကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုခံစားခဲ့ရရုံသာမကပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူတိုင်းကိုလေးစားတန်ဖိုးထားစွာဆက်ဆံခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အတွင်းမှာသူဟာတခြားလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။ သူ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ဒေါသနှင့်မငြိမ်မသက်မှုကိုအစားထိုးရွှင်လန်းမှုနှင့်ငြိမ်သက်မှုရှိသည်။ သူကအသက်ငယ်တယ်။ သူ၏ ၀ န်ထမ်းများကသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့လေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်သူတို့ကြိုက်ခဲ့ကြတာပါ။
ဘုရားသခငျ၏အစပြုမှု၏သတ္တဝါများ ဤဇာတ်လမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား နှိမ့်ချမှု၏သော့ချက်ဖြစ်ကြောင်း ပြသည်။ အခြားသူများ၏အကူအညီမပါဘဲ သူသည် မည်သည့်အရာကိုမျှ မအောင်မြင်နိုင်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်က နားလည်ထားသကဲ့သို့ နှိမ့်ချမှုသည် ဘုရားသခင်မပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှ မလုပ်နိုင်ကြောင်း နားလည်မှုဖြင့် အစပြုကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့လည်း နားလည်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်လာမှုအပေါ်တွင် သြဇာသက်ရောက်မှုမရှိသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကောင်းမှုမှန်သမျှကို ဖန်တီးပေးခဲ့ကြောင်း ကြွားဝါခြင်း သို့မဟုတ် မတောင်းဆိုနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ အစပြုမှုကြောင့် သတ္တဝါများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်က အစပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချဉ်းကပ်ပြီး ဖော်ပြ၍မရသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကျွန်ုပ်တို့အား မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် (၁ ယောဟန်၊ 4,19) သူမရှိဘဲ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှမှာ "ကျေးဇူးတင်ပါသည်" ဟုပြောကာ ယေရှုခရစ်ကိုခေါ်ဆောင်သူအဖြစ် - ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံ၊ ခွင့်လွှတ်ပြီး ချစ်မြတ်နိုးသူများအဖြစ် သမ္မာတရား၌ အနားယူပါ။
အရွယ်အစားကို တိုင်းတာခြင်း၏နောက်တစ်နည်းမှာ မိမိကိုယ်ကို ဤသို့မေးကြပါစို့- "ငါသည် မည်သို့နှိမ့်ချနိုင်သနည်း"။ ဆိုရိုးစကား 3,34 ရှောလမုန်သည် သူ၏ပညာရှိစကားများကို ရေးသားပြီးနောက် အနှစ် ၁,၀၀၀ နီးပါးအကြာတွင် တမန်တော်ယောဟန်နှင့် ပေတရုတို့သည် ၎င်းတို့၏သွန်သင်ချက်များတွင် ၎င်းတို့အား ရည်ညွှန်းခဲ့သည်မှာ အလွန်မှန်ကန်ပြီး အချိန်ကိုက်ပါသည်။ လက်အောက်ခံခြင်းနှင့် အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအကြောင်း မကြာခဏပြောလေ့ရှိသော သူ၏စာတွင် ပေါလုက “သင်တို့ရှိသမျှသည် နှိမ့်ချသောအားဖြင့် ကိုယ်ကိုကိုယ်ဝတ်စေသင့်သည်” (၁ ပေတရု၊ 5,5; Schlachter 2000)။ ဤအသုံးအနှုန်းဖြင့် ပေတရုသည် ဝတ်ပြုလိုသည့်ဆန္ဒကိုပြသရန် အထူးခါးစည်းကို ၀တ်ဆင်ထားသော ကျွန်တစ်ဦး၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို အသုံးပြုသည်။ ပေတရုက “သင်တို့အားလုံး၊ အချင်းချင်း နှိမ့်ချစွာ ဝတ်ပြုခြင်းငှာ အသင့်ရှိကြလော့။” ယေရှုသည် ခါးစည်းကိုဝတ်ပြီး တပည့်များ၏ခြေကိုဆေးသောအခါ နောက်ဆုံးညစာစားပွဲကို ပေတရုတွေးနေမည်မှာ သေချာသည်။3,4စာ-၁၇)။ ယောဟန်အသုံးပြုသော “မိမိကိုယ်ကိုစည်းရန်” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် ပေတရုအသုံးပြုသည့်အတိုင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် မီးဖိုကိုချွတ်၍ လူအပေါင်းတို့၏ကျွန်ဖြစ်တော်မူ၏။ ဒူးထောက်၍ ခြေဆေးတော်မူ၏။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို မည်မျှဝန်ဆောင်မှုပေးသည်နှင့် အရွယ်အစားကို တိုင်းတာသည့် ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အခြားသူများကို ဂုဏ်ယူစွာ နှိမ့်ချကာ "ကျွန်ုပ်ကို ထမ်းဆောင်ပါ" ဟု ဆိုကာ နှိမ့်ချမှု က အခြားသူများကို ဦးညွှတ်ကာ "ငါ မင်းကို ဘယ်လိုအစေခံရမလဲ" ဤအရာသည် လူတစ်ဦးအား ခြယ်လှယ်ရန်၊ ပေါ်လွင်စေရန်နှင့် အခြားသူများရှေ့တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်တွင် မိမိကိုယ်ကို ထားရှိရန် တောင်းဆိုသည့် လောကတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှိမ့်ချသောဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုရန် သူ၏သတ္တဝါများရှေ့တွင် ဒူးထောက်ကာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဒါ အံ့ဩစရာ မဟုတ်ဘူးလား?
“ ငါလုပ်ခဲ့တာအတိုင်းလုပ်ပါ” နှိမ့်ချမှုဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုတ်ညံ့သူလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာမျှမဖြစ်စေဘဲဘယ်သူ့ကိုမှတင်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကနှိမ့်ချမှုအတွက်ချီးမွမ်းခံရဖို့ရည်ရွယ်တဲ့လှည့်စားတဲ့မာနကြီးပါလိမ့်မယ်။ နှိမ့်ချခြင်းသည်ခုခံကာကွယ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးစကားလုံးရရှိလိုခြင်း၊ သူတစ်ပါး၏မြင့်မြတ်မှုကိုဖော်ပြရန်နှိမ့်ချခြင်းနှင့်မပတ်သက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုအမှီအခိုကင်းသည်ဟုခံစားရခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ပို၍ အရေးကြီးသောအရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တော့်ကိုမျက်ခြည်မပြတ်စေရန်မိမိကိုယ်ကိုထိုးဖောက်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ နှိမ့်ချမှုကဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်အောက်ခံစေပြီးကိုယ်တော့်ကိုလုံးလုံးမှီခိုအားထားကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမကြည့်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှထက်သာစွာကြည့်ရှုတော်မူသောဘုရားသခင်ဆီသို့လုံးလုံးလျားလျားအလှည့်အပြောင်းကိုဆိုလိုသည်။
တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုဆေးပြီးမှယေရှုက၊ ငါပြုခဲ့သည်အတိုင်းပြုကြဟုမိန့်တော်မူ၏။ သူကသူတစ်ပါး၏ခြေကိုဆေးပေးခြင်းသည်အစေခံရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာမည်သို့နေထိုင်ရမည်ကိုဥပမာပေးခဲ့သည်။ နှိမ့်ချခြင်းသည်အစေခံရန်နည်းလမ်းများကိုအမြဲတမ်းသတိရှိရှိရှာဖွေနေသည်။ ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏သင်္ဘောများ၊ သယ်ဆောင်သူများနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည်ဟူသောအမှန်တရားကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ Mother Teresa သည် "တက်ကြွသောနှိမ့်ချခြင်း" ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမကသူမကူညီပေးခဲ့သူတိုင်း၏မျက်နှာပေါ်တွင်ယေရှု၏မျက်နှာကိုမြင်ခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်လာမယ့်မိခင်ထရေဇာလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ပေမယ့်လူသားချင်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့သာသက်ဆိုင်သင့်တယ်။ မိမိကိုယ်ကိုအလွန်အလေးအနက်ထားရန်သွေးဆောင်ခံရသည့်အခါဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးဟဲလ်ဒါကာမာရာ၏စကားများကိုမှတ်မိရန်အကြံပြုသည်။ ဤမြို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို ခံရ၍၊ ငါစီးသောမြည်းကလေးလေးပဲ၊